Ukwaluka amabhande - ke ingenye imisebenzi ethandwa kakhulu phakathi amakhosi abanamakhamera hook. Ukusetshenziswa bavezelwe amathekniki ahlukahlukeneko ungakha izesekeli kanzima futhi obukhulu ngokuphila isikhathi eside.
Kulesi sihloko ezithakazelisa wathungela ibhande hook imidvwebo nezincazelo, ezinye zazo yenza umsebenzi luyingxenye zokuhlobisa, kuyilapho abanye bakwazi ngempumelelo esikhundleni ibhande ezivamile.
Yeka ntambo efanelekayo womshini amabhande
Ekukhetheni impahla kufanele aqondiswe ukuqokwa imikhiqizo esizayo. Ngezansi ungabona ezahlukene ibhande hook, imidvwebo izincazelo, izithombe ngisho isigaba okuyinhloko. Kulokhu, ukubukeka kanye kwenkululeko kwazo ngazinye lezinto awafani.
amabhande Esincane, izimbadada, amabhande jumpsuit ivame ukuhlobisa ingubo ububanzi noma ingubo. Kule mikhiqizo, ungasebenzisa ngokuphepha iyiphi ntambo brand. Into esemqoka ukuthi nombala onjani ingafani nakho konke wezigqoko.
Kunezinhlobo ezihlukahlukene ukotini ezifanele, nelineni, rayon, uvolo, wangaphandle, inayiloni ngisho acrylic. Nokho, ne acrylic kufanele aqaphele, njengoba izihloko eziningi eziphathelene le nto, bheka ngokungagwegwesi ezishibhile.
Ukuze ukwakha ebanzi futhi obukhulu ibhande hook, isifunda kanye nokudalulwa okuyinto kungafaka noma yimaphi iphethini okuqinile, kuzothatha ukotini ezinzima noma ngentambo yelineni. Ngezinye izikhathi ukubukeka ehloniphekile bungatholakala ngokusebenzisa polyamide noma wangaphandle, kodwa kulokhu esibophezelayo kumele kube wenziwe phakathi nesikhathi esifushane.
Nciphisa okhalweni ukukhilosha: isikimu kanye nencazelo
Esithombeni esingezansi, kubekwe ukulandelana elula yokukhiqiza ibhande. Material kudingeka kancane, cishe 10 amagremu. Intambo kufanele kube kahle obukhulu, hhayi ngaphansi kuka-200 m / 100 amagremu.
Ngisho ne zingancane wemakhono ukunitha, ungenza hook ibhande ezinjalo. Isikimu kanye nencazelo komkhiqizo optic elula:
Yabela uchungechunge yaseZimbabwe ezine (CAP).
Kumjikelezo yesibili obumbene 5 Amabha ngaphandle sc (PTBs).
Kule minyaka engu-loop run 1 PTBs.
Jikela lendwangu tie lift iluphu.
Esikhathini PTBs yesibili obumbene PTBs 5, khona-ke PTBs wesithathu enze esinye PTBs.
Zungezisa ukusebenza bese uphinda ukulandelana ezichazwe 4th futhi izigaba 5th.
Intambo obuphelele oyifunayo inikezwa ngogubhu - futhi zonke, umkhiqizo ulungile! Eqinisweni, lena bakudala kakhulu futhi esingesihle tape lace. Zonke namanye amaphethini zenzelwe ku isimiso esifanayo, kodwa aqukethe imigqa abaningi.
Ties kungaba nje izindikimba, uchungechunge yaseZimbabwe noma kuze kudabuke umhlane okuhlobisa. Ukuze silinganiso zabo emaceleni ukuncoma thunga ubuhlalu.
Openwork Belt izisusa ukukhilosha: isikimu kanye nencazelo
Le modeli uhlale ethandwa isikhathi eside kakhulu. Ukuze yokukhiqiza yayo obumbene izingcezwana ezifanayo ngaphezulu noma ezahlukene, abese ezihlanganiswe umdweshu.
Ngokuqinisekile kukhona round ozithandayo zonke knitter noma isinqamu square likwazi ukufeza ngokoqobo ngamehlo akho ivaliwe, kuba impela efanelekayo umkhiqizo ezifana ibhande hook. Isikimu kanye nencazelo esinye sezizathu ebhalwe ngemuva kwalokhu.
Ukuze uqale ukuhlanganisa i-uchungechunge 6 VI futhi ukuyivala esiyingini ke enze izinyathelo ezilandelayo:
4 CAP ikholomu aluhlaza 3 amakholomu kanye sc (STN), 5 VI * ikholomu aluhlaza kusuka STN 4, 5 VI *. Phinda kusuka * ukuze * ekupheleni ilandelana.
5 * VI 3 STN nge vertex ezivamile, Pico 3 VI, 3 STN nge vertex ezivamile, 5 VI PTBs *. Phinda kusuka * ukuze * ekupheleni ilandelana.
Imbali nomphumela has iphakama eziyisithupha, kulula kakhulu ukukhiqiza ibhande bushelelezi (vertices amabili ohlangothini ngalunye exhunywe kwi-imbali yesibili, amabili ahlale phezulu kanye phansi). Lezi amabhande kudingeka ukugcizelela okhalweni.
Isibonelo esihle imbali elula. Uyaxhunywa endaweni kakhulu ntambo obukhulu, kuyoba umhlobiso olukhulu izingubo eziningi.
Uma umkhiqizo is kuhlelwe ukuba igqoke okhalweni, kungcono ukuba ukhethe Motifs pentagonal. Badinga ixhunywe ukuze ibhande kwaba ukuma lulwimi yindilinga.
Tight okhalweni jeans
Uhlobo esilandelayo amabhande wathungela yakhelwe ukwenza umsebenzi esiwusizo: basuke alayishwe iluphu of ibhulukwe kanye iziketi.
Yiqiniso, kuwebhu imikhiqizo enjalo kumele ibe nzima kakhulu, kungenjalo siyovivinywa futhi ngeke enze noma yimuphi umuzwa. Njengoba sekushiwo ngenhla, kungaba kubhekwe okungcono ukotini, nelineni, inayiloni noboya.
I ukushuba we ngentambo - okungenani 180-200 m / 100 amagremu, nemkhawulo Friend kakhulu. Ukuze sifinyelele ukuminyana eyanele, ungasebenzisa usayizi hook ezincane kuno ukuthi Kunconywa for ntambo ezikhethiwe (isib, hhayi № 4.5, futhi № 3).
Izimfihlo ukunitha obukhulu
Iphethini kungenzeka Amabha elula noma sc ngaphandle imiklamo eyisisekelo. Uma wacosha ngentambo Friend ngokwanele, ungasebenzisa indlela elandelayo:
PTBs obumbene chungechunge.
Jikela lendwangu enze enye inombolo, tieing le PTBs elalisanda kumiswa. Okusho ukuthi, ngamunye wabo ngeke kabili.
Phinda algorithm kuchaziwe esigabeni 1 no-2.
Le ndlela kanti futhi kuhle ekwenzeni visors ofeleba, izigqoko igalofu ezinjengenyanga nemithi.